Ukuhlobana izinwele udayi kuphezulu kakhulu. Ngaphambili wasebenzisa ogxile abesifazane sinombono ukufihla kwempunga yavela. Kodwa muva nje, izinwele zakhe obudaywe izintokazi babo bonke ubudala. Ezinye ngosizo upende engeza kukhanye ukuze imicu yakho yemvelo. New izinwele umbala ikuvumela ukuba ushintshe ngokushesha isithombe, ukuze agcizelele ukuthi izici zobuso. Kuye ekhanda izinwele imibala Ungabheka amadala noma abaneminyaka engaphansi yabo. Okunezinhlobonhlobo izimonyo emashalofini libanzi, futhi kunzima ukuba wenze isinqumo. Esinye salezo okungukuthi azinake umbala izinwele "ezingavamile".
Hypoallergenic izinwele wemvelo, okuyinto uchaza kahle phezu imicu e umbala oyifunayo, kuyilapho nawe ungalushayi ngibenza ukulimaza ngaphandle kokudala ukungakhululeki amakhasimende sasimthanda abalungisa izinwele professional emhlabeni wonke.
ifomula komkhiqizo kusekelwe ezimisweni ezintathu:
Ukuze sizame ukunciphisa amathuba lemali ammonia eziqukethwe upende.
Sebenzisa izingxenye amaprotheni ku Ukwakheka, njengoba bebizwa ukubhekana kahle nezinwele umsoco.
Zama ukugcina asidi hlangothi.
Umkhiqizo wokuqala Umbala imicu yasungulwa barber Dzherri Reddingom a ngaphezu kwesigamu kancane eminyakeni eyikhulu edlule. Isidingo ukudala i umkhiqizo omusha ngokuphelele okungahambisani baxabane nomzimba, emizweni ezingemnandi ekhanda futhi musa konakalisa izinwele, Kuvezwe ngenxa actress Paula Kent.
Kungakhathaliseki ngemigudu ekhona ngesikhathi imibala wezinwele noma wazama, lutho wayeza umdlali waseshashalazini. Ngenxa yalokho we babambisane nombusi izinwele kuqala udayi "ezingavamile" yadalwa, engesiyo kuphela izinwele obudaywe kahle, kodwa futhi wabanakekela.
Uchungechunge ethandwa kakhulu imibala
Izinwele udayi "azivamile" ukhona emakethe izimonyo professional kanye eliphezulu iminyaka eminingi. Le nkampani hhayi emi namanje futhi ithuthukisa ububanzi ngokuya ezintsha imikhiqizo elikuvumela ukuba ukhethe ithuluzi best for amaklayenti ngamunye.
Omunye ethandwa kakhulu iyona umugqa Chemistry. Luhle phezu-omisiwe, izinwele ezilimele eziye zabhekana repainting eziningana, ezinganikwa ezinye hhayi kodwa kuthinta isimo sabo. Phakathi upende luwuphawu umsoco ezijulile izinwele amaprotheni rehydration. Kulesi umugqa ungathola futhi unakekele makeup, ikhono ukubuyela ukushaqeka izinwele ubuhle kanye nezempilo.
Umbala Fusion kungenye umugqa base "ezingavamile". Izinwele udayi, Iphalethi esakhiwa amathoni zakudala, lingena kahle ku isakhiwo izinwele. Lapho umbala iphikelela futhi eside wageza off. Izithako uveza angaphezu kwempunga ukuthi kukude iyiphi izimonyo. Ngaphezu kwalokho, lapho ilanga lingashoni khona abalona ingozi ukuze imicu umbala. Akenzi fade, ngakho abathandi ukuchitha isikhathi ogwini akufanele esabe.
umbala lulwimi unomphela
Ububanzi imikhiqizo olunikezwa inkampani, emelelwa Beyond Cover Urban Chill. It bezammiachnoy umnakekeli izindlela ( "ezingavamile" I-udayi izinwele). Palette siqukethe shades ezine engokwemvelo ensundu, igolide, igolide kanye Ashen kulokoza segolide. Thenga kumentshiso izinwele umbala uze ukwazi ukusebenzisa lo mugqa. Isetshenziselwa ukwenza ubuhle nokujula we zemvelo izinwele umbala. Ukuze ikhiye bengakabi enempilo, ukudla inikeza uhla amafutha, amavithamini namaminerali ezenza lesi upende.
Omunye umkhiqizo efanayo kuyinto lulwimi unomphela umbala Shades EQ Cream. Lokhu udayi izinwele "ezingavamile" kuyinto zithandwa kakhulu. It ayikuvumeli ukuba ngokuphelele ukushintsha yemvelo izinwele umbala. Inhloso yalesi izindlela kuyinto ekuguquleni ukubukeka izinwele. Umbala kuba ezijulile futhi te ngaphezulu. Thola enempilo izinwele akhanye futhi ivolumu ngokusebenzisa umsoco ezijulile.
Umugqa ngoba amadoda
Le nkampani iye zinakekelwe ayigcinanga ngokuchaza ukuthi ubuhle izinwele zabesifazane, akabushiyanga ngaphandle ukunakwa nengxenye enamandla lwesintu, ebamema ukuba Umbala camo Salon Izikhungo.
"Angavamile" (izinwele udayi amadoda) itholakala 6 imibala futhi likuvumela ukhethe umthunzi ezifanele kakhulu kuwo wonke umuntu. Painting kusiza balahle kwempunga ngaphandle esishintsha umbala engokwemvelo izinwele zemvelo. Ngaphandle enhle toning umphumela upende uyasondla ngokuphelele izinwele, okwenza we enhle enempilo, acwebezelayo futhi.
Imibono ephathelene upende
Lokhu akulona umkhiqizo kunazo owaziwa futhi ethandwa izimonyo nezinwele. Ngakho-ke, abaningi ngisho nanamuhla angazi lutho mayelana ezifana umkhiqizo ngokuthi "ezingavamile" (izinwele wemvelo). Izimpendulo ngakho kakhulu ziphoqa. Uma utadisha ngokucophelela, phakathi izinzuzo kufanele ezigqanyisiwe:
inqubo ukudaya senzeka ngaphandle kabi;
izinwele kuba soft futhi ucwebezela;
upende ugwema ezingemnandi yellowing ejwayelekile zalabo abakhetha ukukhanya shades of izinwele.
I ethile eyinhloko, esesikhundleni udayi izinwele "ezingavamile", - intengo. Izindleko ibala in the gumbi kungadla ezingaphezu kuka-10 eziyinkulungwane. Hlikihla. A option ukonga ngaphezulu kuyinto ukudaya ezimele ekhaya. Izindleko kuyoba aphansi. tube kapende izobiza ruble 700-1000. Umthuthukisi izobiza ruble mayelana 1,500. Ukusetshenziswa kuncike ubude kanye ukushuba izinwele.
Omunye ethile, abanye abathi yokuthi upende bome izinwele ngaphambilini ezidayiwe futhi kubenza ziyaqothuka ngaphezulu. Lokhu kungase kube ngenxa ukusetshenziswa okungafanele komkhiqizo noma izici izinwele ngabanye.
udayi ammonia-free "azivamile" ukunikeza izinwele zakho akhanye futhi ubuhle. Ngiphephile Iphalethi ezibanzi kuzokusiza ukhethe umthunzi ephelele nge ikhono ukuhlanganisa imibala amaningi.
Umuthi 'Azithromycin "nge sinusitis: Umhlahlandlela kanye nokubuyekeza
FMCG - kuyini? FMCG emakethe nokumaketha izimfihlakalo zayo